Khilaaf Xoog Leh Oo Ka Dhex Dhashay Gudoonka Baarlamanka Somaliland & Boolis Farageliyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Khilaaf Xoog Leh Oo Ka Dhex Dhashay Gudoonka Baarlamanka Somaliland & Boolis Farageliyey
Hargeysa – Mareeg.com: Waxaa sii xoogeystay khilaaf maalmihii lasoo dhaafay ka dhex aloosnaa gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland C/raxmaan C/llaahi Cirro iyo ku xigeenkiisa 1-aad Baashe Maxamed Faarax.
Kualnkii manta Haregysa ay ku yeesheen mudanayaasha baarlamaanka Somaliland ayaa waxaa sababay in gacmaha la isula tago, islamarkaana boolis xoog ku galaan xarrunta kulanbku ka dhacayey.
Ciidamada booliska ee xooga ku galay xarunta baarlamaanka ayaa waxaa dalbay Gudoomiye Kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka Somaliland Baashe Maxamed Faarax oo khilaaf soo jiitamayay mudo u dhaxeeya isaga iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka C/raxmaan Cirro.
Baarlamaanka ayaa la keenay labo mooshin oo iska soo horjeeda, kuwaasoo ay soo gudbiyeen xildhibaano kala taageerayey labada Mas’uul, waxaana arrintu sii kacday kadib markii boolisku xarrunta xoog uga saareen dadweyne dhageysanayay ajandayaasha laga doodayay, iyadoo uu arrintaas amray Gudoomiye kuxigeenka 1-aad oo ku tilmaamay dad loo soo diray in ay buuq kiciyaan.
Kalfadhiga oo goor dambe si kooban u furmay ayaa Gudoomiye C/raxmaan Cirro ka akhriyey mooshino ay soo gudbiyeen mudaneyaal ka tirsan Baarlamaanka oo ku saabsan xeer hoosaadka oo qodobo laga beddelaayo.
Qodobada la bedelaayo waxaa kamid ah tirada Xildhibaanada xilka uga tuuri karaan gudoomiyaha oo markii hore aheyd 55, haddase ay soo gudbiyeen in laga dhigo 42 xildhibaan.
Xildhibaanada ayaa la kala saftay labada dhinac, waxaana uu Gudoomiyaha Baarlamaanka markii uu kahor akhriyey mooshinada xiray kalfadhiga balse taas waxaa diiday xildhibaano mucaaradsan.
Gudoomiye C/raxmaan Cirro ayaa ku eedeeyay Xukuumadda gaar ahaan Madaxweyne kuxigeenka Somaliland in uu ka dambeeyo fowdada isla markaana uu abaabulaayo Xildhibaanada, isagoo la hadlayey BBC.
Shalay sidaan oo kale ayaa buuq ka dhashey kalfadhiga Baarlamaanka, waxaana markii dambe soo kala dhexgalay Odeyaasha guurtida oo xaaladda dejiyey.
Waxaa magaalada Hargeysa ka socda dedaallo lagu qaboojinayo xaaladda ka dhex aloosantay xildhibaanada Somaliland, iyadoo ilaa hadda labada dhinac ku dadaalayaan iney ka guuleystaan dhanka kale.
Japn Oo Qalab Xafiiseed Siisay Booliska Soomaaliya (Sawirro)